बर्दियामा गोली लागेर एकको मृत्यु
१७ असार, बर्दिया । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–३ मा भारतीय जङ्गलमा गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएको छ । बिहान करिब १० बजे सीमावर्ती भारतीय जङ्गलमा निउरो टिप्न गएका हेमराज गोडियाको अज्ञात व्यक्तिले च...
onlinekhabar.com . ८ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पहिरो खस्दा ८ दिनसम्म खुलेन पोखरा–सिक्लेस बाटो
१७ असार, पोखरा । असार ९ गते राति परेको अविरल भारी वर्षाले पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको पोखरा–सिक्लेस बाटो अझै खुल्न सकेको छैन । वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा ८ दिनदेखि बाटो पूर्ण रुपमा अवरुद्ध ...
onlinekhabar.com . ११ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बागलुङमा पनि ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती सुरु
१७ असार, काठमाडौं । बहुगुणी फलफूलको रुपमा रहेको ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती बागलुङमा सुरु भइसकेको छ । एक वर्षअघि मात्रै बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–१ पाला करिनाका प्रतिमान थापाले वैदेशिक रोजगार...
onlinekhabar.com . १७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
१७ असार, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या १७ पुगेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुम्मन लाल दासका अनुसार शुक्रबार कागेश्वरी मनोहरामा थप एक जन...
onlinekhabar.com . ५६ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कुहिने फोहोर बञ्चरेडाँडा नलैजाने उपाय खोज्दै महानगर
१७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, जैविक फोहोरलाई उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइडमा फोहोर छुट्याएर मात्रै खसाल्ने सहमति गरेको महानगरले आगामी सा...
सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस : संरचना निर्माणका लागि दाताकै भर !
१७ असार, सुर्खेत । सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस स्थापनाको ५० वर्ष भइसकेको छ । क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप वर्षेनी बढ्दो छ । तर पुराना भौतिक संरचनाहरु जीर्ण बन्दै गएका छन् । विद्यार्थीलाई पढ्न भवनको अभा...
निर्माणाधीन कमला पुल भाँचिएको एक वर्षदेखि जस्ताको तस्तै, स्थानीयबासी समस्यामा
१७ असार, जनकपुरधाम । मधेशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कमला नदीको पुल भत्किएको एक वर्ष पूरा भएको छ । १७ असार २०७८ मा निर्माणको अन्तिम चरणमा कमला नदीको पुलको एउटा स्...
प्रदेश १ सरकारलाई चाहिने स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको खोजी सुरु
१७ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षत...
गैँडा सिकारी समूहका नाइके दाजुभाइ पक्राउ
१७ असार, काठमाडौं । गैंडा सिकारी समूहका नाइके रामकुमार प्रजा र बमबहादुर प्रजालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । यसअघि पनि गैँडा सिकारी गरेको अभियोगमा १५ वर्ष जेल ...
थाइ स्माइलले थाल्यो बैंकक–काठमाडौ‌ं उडान
१७ असार, काठमाडौं । थाइल्याण्डको वायुसेवा कम्पनी थाइ स्माइल एयरवेजले बैंकक–काठमाडौं–बैंकक रुटमा उडान थालेको छ । यो रुटमा शुक्रबारदेखि दुई तर्फी हवाई सेवा सुरु भएको हो । कम्पनीका अनुसार अब दैनिक एक...
जब राष्ट्रपति भण्डारीले सडकमा झाडु लगाइन्
१७ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा जगन्नाथ रथयात्रा निकालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ (स्कोन)को आयोजनामा शुक्रबार सुन्धाराबाट जगन्नाथ रथ यात्रा सुरु गरिएको थियो । शहर परिक्रमा गरी बेलुक...
प्राणायाम : तन स्वस्थ, मन सन्तुलित
काठमाडौं । सास नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई प्राणायाम भनिन्छ । प्राणायाम दुई शब्द प्राण र आयाम मिलेर बनेको हो । प्राणको अर्थ महत्वपूर्ण ऊर्जा वा जीवन शक्ति हुन्छ । प्राणायाममा श्वासप्रश्वासका माध्...
१७ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आइतबार विहान ११ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बत...
असारे विकास : अलकत्रा पग्लिएर सडक जाम !
१८ असार, काठमाडौं । बिहीबार राति जमलमा चर्किएको कालोपत्रे सडक मर्मत गर्न बिटुमिन (अलकत्रा) खन्याइयो र बालुवा छरियो । तर, बिहान मात्रै थाहा भयो, अलकत्रा त आवश्यकता भन्दा बढी पो परेछ ! शुक्रबार दिउँ...
१७ असार, जनकपुरधाम । लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित जनकपुरधामबाट एक युवक र एक युवती पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको खडक नगरपालिका वडा नम्बर ८ खोजपुर बस्ने २४ वर्षीया रजनीकुमारी चौधरी र सिरहाको...
१७ असार, काठमाडौं । तपाईं विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र साथमा आफ्नो बाहेक अरु कसैका बालबालिका साथमा छन् ? त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु भएन भने अध्यागमनले रोक्न सक्छ । अध्यागमन व...
नेपालमा बरामद भएको करोडौंको हेरोइनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो : तस्करले किन प्रयोग गरे उल्टो रुट ?
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) ले जेठ अन्तिममा तीन दिन अपरेशन ‘ह्वाइट डस्ट’ चलाएर हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा लागूऔषध हेरोइन बरामद गर्‍यो । ब्यूरोका एसपी...
सस्तोमा इन्धन किन्न भारतसँग अनौपचारिक छलफल
१७ असार, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न अनौपचारिक कुराकानी सुरु गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यका कारण समग्र अर्थतन्त्रमै असर परेपछि सरकारले सस्तोमा इन्धन ...
अब परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक छैन : सुवास नेम्वाङ
१७ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले परिवर्तनको लागि नेपालमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमडौंमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पस...
सबनम मुखिया निर्देशित फिल्म ‘जुभेनाइल’लाई २०० कलेजमा देखाइने
काठमाडौं । सबनम मुखिया निर्देशित छोटो फिल्म ‘जुभेनाइल’लाई मुलुकका २०० भन्दा बढी कलेजमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको पद्मोदय उच्च माविमा फिल्मको पहिलो प्रदर्शनी गरियो । लागूऔषध प्रयो...
‘यो सरकार कामचलाउ मात्रै हो’
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल १४औं महाधिवेशन अघि सभापति शेरबहादुर देउवाको कट्टर आलोचक थिए । १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने अवस्था नरहेपछि तटस्थ बसे । पार्टी निर्वाचनमा कुनै पदमा उम्मेदवार...
‘लू’ फिल्मको प्रमुख भूमिकामा सौगातलाई पनि प्रस्ताव, इलैयाको भूमिका कसले गर्ला ?
काठमाडौं । नयनराज पाण्डेद्वारा लिखित पुस्तक ‘लू’माथि आधारित हुने फिल्मका लागि यतिबेला प्रमुख कलाकारको खोजी भइरहेको छ । मुख्य पात्र इलैयाको भूमिकामा कुन कलाकारले अभिनय गर्नेछन् भन्नेबारे निधो भइसके...
धादिङको सिम्ले बजारमा माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा विस्तार
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले धादिङको सिम्लेमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । योसँगै माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा संख्या १६५ पुगेको बैंकले जनाएको छ । नयाँ शाखा कार्यालयको उद्घाटन नेपाल पेट्रोलिय...
काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी) ले ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी कलेजका विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान र विकासलाई सहज बनाउने उदेश्यको साथ ...
काठमाडौंको आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित
१७ असार,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । महानगरको शुक्रबार बसेको नगरसभाको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो । आर्थ...
अदालतको आदेशपछि मृगौला प्रत्यारोपण
१७ असार, काठमाडौं । उच्च अदालतको आदेशपछि एक दिदीले भाइको मृगौला प्रत्यारोपण गरेकी छन् । विरामीको बाच्न पाउने हक हनन हुने भन्दै उच्च अदालत पाटनले मृगौला प्रत्यारोपणमा अवरोध नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ...
तरकारी र फलफूलमा हानिकारक विषादीको मात्रा भेटियो : गुण नियन्त्रण विभाग
१७ असार, काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले देशका विभिन्न भागमा गरेको परीक्ष...
अमेरिकामा वृहत् नेपाली सम्मेलन हुँदै, कांग्रेस महामन्त्री शर्माले उद्घाटन गर्ने
१७ असार, काठमाडौं । गैह्र आवासीय नेपाली महासंघ अमेरिकाको ११औं सम्मेलन र तेस्रो `नलेज कन्भेन्सन´ यही जुलाई ३ र ४ मा नर्थ क्यारोलिना राज्यमा हुँदैछ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले...
जी-ट्वान्टीवानले खरिद गर्‍यो फिल्म ‘के घर के डेरा’को डिजिटल अधिकार
काठमाडौं । अभिनेता तथा गायक आसिफ शाह नेतृत्वको कम्पनी जी–ट्वान्टीवान डिजिटलले फिल्म ‘के घर के डेरा’को डिजिटल अधिकार लिएको छ । दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित फिल्मको राइट लिएसँगै कम्पनीले अन्य फिल्मक...
प्रदेश अस्पतालको एमआरआई खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पतालले एमआरआई खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजानिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । सिभिल सर्भिस अस्पताल काठमाडौंले २२ करोडमा खरिद गरेको एमआ...
१७ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । शुक्रबा...
जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकमाथि अखिल (क्रान्तिकारी)को दुर्व्यवहार
१७ असार, काठमाडौं । समयमा नै पाठ्यपुस्तक दिन नसकेको भन्दै विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा निकट विद्यार्थीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई दुर्व्यवहार गरेका छन् । अखिल ...
१७ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्ने प्रयास नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तगतक...
पानीको दुःख टर्छ, पैसा बच्छ
१७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ डल्लुको आफ्नै घरमा मन्टेसरी स्कुल सञ्चालन गरेका नरेन्द्र डंगोललाई दैनिक १२०० लिटरसम्म पानी चाहिन्छ । घर र स्कुलका लागि ट्याङ्करको पानी किन्नु पर्दा उनले...
१७ असार, काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । उनले असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका थिए। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर लामि...